Inona no ary manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny ecomobility | Fanavaozana maintso
Ny fitomboan'ny fandotoana any amin'ny tanàn-dehibe ary ny vokadratsin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiakaran'ny maripana manerantany dia manery ny tanàna tsy hanimba ny tontolo iainana. Ny ankamaroan'ny loharanon'ny fandefasana entona mandoto ny tanàna dia avy amin'ny fitaterana. Miaraka amina fiara an-tapitrisany mivezivezy amin'ny fotoana rehetra dia matotra ny vokadratsin'ny olom-pirenena sy ny tontolo iainana.
Mba hanamaivanana ireo olana ireo dia mipoitra ny ecomobility. Momba ny fivezivezena maharitra maharitra tafiditra ao anaty tanàna hampihena ny fiantraikan'ny fitaterana amin'ny tontolo iainana. Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny ecomobility misy ary inona ny toetra mampiavaka azy?
1 Inona no atao hoe ecomobility?
2 Ny maha-zava-dehibe ny ecomobility
3 Vahaolana izay mandroso ny fivezivezena maharitra
4 Sertrans sy ecomobility
Inona no atao hoe ecomobility?
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny ecomobility dia mipoitra avy amin'ny filàna fampidirana ny foto-kevitra momba ny ekolojia amin'ny fitaterana. Ny fivezivezin'ny tanàna dia miankina amin'ny karazan-tsolika ampiasaina, ny tambajotram-pifandraisana, ny fisian'ny zotram-by, ny fahafahan'ny fitateram-bahoaka sns. Noho izany dia ilaina ny mampiditra fepetra hampihenana ny fandotoana.
Ny ecomobility dia mandrakotra ireo rafitry ny haino aman-jery izay mitarika ny olona sy ny zavatra amin'ny toerana iray, mitahiry sy miaro ny natiora sy ny tontolo iainana. Ity fivezivezena mahasalama ity manampy antsika hanohy amin'ny ho avy lavitra mampihena hatrany ny fandotoana. Ny foto-kevitry ny fampandrosoana maharitra dia miditra amin'ny ecomobility ihany koa. Ilaina ny fitaterana hahafahantsika mamaly ny filàna ankehitriny nefa tsy manimba ny taranaka any aoriana hihaona amin'ny azy ireo.
Ny ecomobility dia fantatra koa amin'ny hoe fivezivezena maharitra. Mety tsy vao sambany ianao nahare an'izany. Na izany aza, matetika dia afangaro amin'ny hetsika toy ny mandeha an-tongotra, mampiasa fitateram-bahoaka na bisikileta. Marina fa ireo hetsika telo ireo dia manampy amin'ny fampihenana ny fandotoana ary ny fivezivezena maharitra. Fa ny ecomobility dia tsy izao ihany. Izy io dia fitambaran'ny fitaovam-pitaterana tsy dia mandoto loatra ary tamba-jotra iray manamora ny fivezivezena.
Ny maha-zava-dehibe ny ecomobility
Zava-dehibe ny faharetan'ny fitaterana an-tanàna raha tsy te ho faty aloha loatra isika noho ny fandotoana. Ny fandotoana ny rivotra dia voalaza fa maso mangina tompon'andraikitra amin'ny famonoana olona. Inona koa, manimba tranga ny sohika, allergy ary olana ara-pisefoana sy kardia hafa. Noho io antony io dia tsy maintsy ny fitaterana antsika no mety indrindra amin'ny tontolo iainana.
Ny ecomobility isan'andro dia mihabetsaka ny lanjan'ny fiaraha-monina. Fahita tokoa ny mahita ny fomba anomezan'ny olona azy ireo ary ao anatin'ny voambolana mahazatra. Ny dian-tongotra ekolojika navelan'ny fitateranay dia mitombo isan-taona. Amin'ny ambaratonga tsirairay dia tsy midika inona izany, fa maro loatra amintsika manerantany.
Ny fampiasana fiara sy fiara hafa mitaky solika fandotoana dia matetika tokoa. Fiara tsirairay avy mamoaka CO2 an-taonina ao amin'ny atmosfera isan'andro. Ho fanampin'izay, tsy maintsy dinihintsika ny fitaterana entana. Na dia misy ifandraisany amin'ny toekarena sy ny fitomboana aza (amin'ny alàlan'ny famoronana asa), dia sehatra mandoto izany. Ao amin'ireny sampana fitaterana ireny no ilaina ny fampiharana hetsika izay manampy amin'ny tsy fitoviana.
Ny maha-zava-dehibe ny ecomobility dia miankina amin'ny filàna fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra sy ny fahasalamana any an-tanàna. Saika 40% -n'ny famoahana entona mandoto ny tanàna no avy amin'ny fitaterana ara-barotra.
Tsy toy ny eritreretina, ny fampiasana fiara mandoto dia tsy vitan'ny hoe miantraika amin'ny tontolo iainana na ara-pahasalamana, fa eo amin'ny lafiny toekarena sy sosialy koa. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana, ny tsy fitoviana ary ny fahaverezan'ny fifaninanana noho ny fihoaran'ny fiara mihodina.
Vahaolana izay mandroso ny fivezivezena maharitra
Ny fivezivezena maharitra dia tsy ny bisikileta, mitaingina bus na mandeha fotsiny. Ny momba ny fanolorana vahaolana samihafa mba haharitra kokoa. Mba hahitanao ohatra iray, tao amin'ny kaongresy no nanambarana fa amin'ny arabe 3,5 metatra ny olona 2.000 afaka mandalo fiara ao anatin'ny 1 ora. Raha bisikileta izy ireo, 14.000; mpandeha an-tongotra, 19.000; amin'ny lamasinina maivana, 22.000 ary amin'ny bus, 43.000. Ary maro hafa amin'ny alàlan'ny metro, izay mandoto kely noho ny bus.
Tsy olana amin'ny fisafidianana fitaterana sahaza, fa ny fanombanana ny isan'ny olona afaka mandeha amin'ny arabe iray ihany. Raha misafidy fiara mahazaka olona betsaka isika, dia hampihena be ny fandotoana.
Ny sasany amin'ireo hetsika nataon'ny ecomobility dia:
Ampiasao ny rafitry ny bisikileta ampahibemaso any amin'ny tanàna maro.
Ataovy loha laharana ny fitateram-bahoaka fa tsy miankina amin'ny tena.
Ampitomboy ny faritra mpandeha an-tongotra.
Ferana ny fidiran'ny fiara amin'ny faritra sasany ao an-tanàna.
Raha mampiasa fiara dia ataovy amin'ny faran'ny olona betsaka araka izay tratra.
Antony iray hafa tokony hijerena ny fivezivezena maharitra ny fametrahana ny làlana. Ny lalamby dia tsy maintsy apetraka amin'ny fomba izay ny halaviran'ny dia sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia kely. Voaporofo fa ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia mandoto bebe kokoa noho ny fivezivezena eny an-dalana.
Etsy ankilany, ny fampidirana ireo fiara izay tsy mandoto ny solika ary miaraka amin'ny emission zero dia jerena ho laharam-pahamehana. Miresaka momba ny fiara mandeha amin'ny herinaratra isika. Raha avy amin'ny solika fôsily ny famokarana herinaratra dia handoto ny famoronana azy fa tsy amin'ny fampiasana azy. Na izany aza, raha avy amin'ny havaozina ny loharanom-angovo, dia tsy hanana emissions aotra ny fiara.
Sertrans sy ecomobility
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fitaterana dia mitentina 40% amin'ny famoahana fandotoana tanàna. Izany no antony nanararaotan'ny Sertrans fampiasam-bola amin'ny fitaterana entana maharitra mandritra ny taona maro. Nandritra izay taona maro izay dia nanao hetsika izay mampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny asany izy.
Ny iray amin'izany dia ny fandaminana ny làlana marina. Mba hampihenana ny fotoanan'ny fitaterana dia manomana ny làlana fohy indrindra resahina i Sertrans tsy amin'ny kilometatra ihany, fa amin'ny famoahana CO2. Ireo mpamily dia mampihatra teknolojia vaovao sy mampiasa ny fanitsiana nomen'ny mpamily hafa. Amin'izany fomba izany dia mihena ny halaviran'ny fitaterana.
Ny hetsika iray hafa dia fanatsarana ny entana. Ny kamio fitaterana dia lehibe kokoa ary afaka mitazona entana bebe kokoa indray mandeha. Amin'izany dia azo ahena ny isan'ny dia ary manakaiky kokoa ny tanjona maharitra.
Farany, Sertrans nitombo ny fitaterana anelanelam-potoana. Izy io dia fitambaran'ny fitaterana an-tanety amin'ireo karazana fitaterana hafa mba tsy handotoana bebe kokoa.
Araka ny hitanao, ny ecomobility dia tena zava-dehibe ankehitriny ary tsy miankina amin'ny fampiasana fitateram-bahoaka sy bisikileta fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Inona no ary manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny ecomobility
Angovo azo havaozina any Espana